Abaphandi yabangela iikhompyutha abantu izame ngokufihlakeleyo ukutyelela ewebhu kwakucingwa kunqandwe ngoorhulumente resistance.
NgoMatshi 2014, abaphandi ngokusesikweni elithile, inkqubo ukubonelela okwixesha-lokwenene kunye nemilinganiselo wonke ci Internet. Ukuqonda oko wasebenza ngayo, makhe sicinge ngayo ngokwemeko lewebhu lakho buqu (ukuba awunayo, uyakucinga umhlobo wakho). Enye indlela cinga ngayo kwiphepha lwenu inkqubo yekhompyutha kubhaliweyo html ngolwimi. Xa umsebenzisi utyelela iwebhusayithi yakho, ikhompyutha yakhe ukopisho yakho inkqubo html uze qulele kwiskrini yakhe. Ngoko, lewebhu lakho Le yiprogram uyakwazi ukubaphembelela iikhompyutha abanye abantu ukuba balandele iiseti ezithile imiyalelo. Ngoko ke, abaphandi, Sam Burnett Nick Feamster, aba Georgia Tech, ziyakhuthazwa abanini website zokufakela snippit encinane ikhowudi ibe amacwecwe zabo:
Ukuba utyelela lewebhu le snippit ikhowudi kuyo, nantsi into eza kwenzeka. Nangona umkhangeli yakho web wawudiliza lewebhu, le snippit ikhowudi kuya kubangela computer yakho ukuzama uqhagamshelane website ukuba abaphandi esweni. Umzekelo, oku kuba website o luvalwe iqela lezopolitiko okanye batshutshiswa iqela lonqulo. Ngoko, computer yakho ingxelo ukuba abaphandi malunga nokuba nako ukuqhagamshelana website ezinokuba evalekileyo (Figure 6.2). Ngaphezu koko, konke oku kuya kubonwa nawe ngaphandle kokuba ukhangele html engumthombo ifayile lewebhu lakho. Olo wesithathu-iqela izicelo page ezingabonakaliyo eneneni eqhelekileyo kakhulu kwi web (Narayanan and Zevenbergen 2015) , kodwa kunqabile kubandakanya amalinge ecacileyo ukulinganisa kuhlolwa.
Isazobe 6.2: Umzobo kuyilo zophando elithile. Kwiwebhusayithi imvelaphi ekuthumelela lewebhu ebhaliweyo html kunye esitsaliwe encinane ikhowudi okuzinziswe kulo (inyathelo 1). computer yakho iguqulela lifayilishwa, nto leyo ebangela ukuba umsebenzi womlinganiselo (inyathelo 2). computer yakho ukuzama ukufikelela ithagethi womlinganiselo, nto leyo inokuba kwiwebhusayithi iqela lezopolitiko umlomo (inyathelo 3). A kumhloli karhulumente, ezifana kurhulumente, ngoko usenokucima ukufikelela yakho inomlinganiselo ekujoliswe (inyathelo 4). Okokugqibela, iingxelo computer yakho iziphumo esi sicelo ukuba abaphandi (hayi kubonisiwe kumzobo). Umzobo Burnett and Feamster (2015) .
Le ndlela ezinye iipropati zobugcisa ibenomtsalane kakhulu umlinganiselo kuhlolwa. Ukuba websites ngokwaneleyo Wongeze le snippit ikhowudi, ngoko abaphandi kunokuba abe okwixesha-lokwenene, zehlabathi-isikali umlinganiselo apho websites ezi yayizihlolisisa, amazwe. Phambi kokuba awasungule projekthi, abaphandi nendibano IRB e Georgia Tech, kunye noMqulu wala ukuba ihlole projekthi kuba leyo "uphando kwizifundo zabantu" phantsi Rule Common (UMthetho Common luluhlu nemimiselo elawula ezininzi federally-ezixhaswa uphando kwi US; ngokuba inkcazelo engakumbi, funda iSihlomelo Historical ekupheleni kwesi sahluko).
Kungekudala emva elithile yasungulwa, nangona kunjalo, abaphandi sadibana Ben Zevenbergen, ngoko umfundi graduate, owamvusayo imibuzo malunga zokuziphatha zeprojekthi. Ngokukodwa, kukho inkxalabo yokuba abantu kumazwe athile ezino mngciphekweni ukuba computer babo bazama ukutyelela websites ezithile sensitive, kwaye aba bantu ukuba ngubani mngciphekweni akazange avume ukuthatha inxaxheba kolu phando. Ngokusekelwe kule ncoko, iqela elithile kancincane iprojekthi ukuzama kuphela umlinganiselo zibekw Facebook, Twitter, kwaye YouTube ngenxa wesithathu-iqela ukuzama ukufikelela ezi sayithi zixhaphakile ngexesha ukhangelo web okuqhelekileyo (umzekelo, zonke lewebhu kunye Facebook Button Like Usenokuziva isicelo wesithathu-iqela kuFacebook).
Emva ukuqokelela idata usebenzisa le otshintshiweyo iphepha echaza methodology kwaye ezinye iziphumo yangeniswa SIGCOMM, inkomfa kwinzululwazi yekhompyutha kangaka. Ikomiti Inkqubo kakhulu igalelo yobugcisa ephepheni, kodwa wavakalisa inkxalabo malunga nokunqongophala lwemvumelwano eyazisiweyo nxaxheba. Ekugqibeleni, ikomiti inkqubo lagqiba ukuba apapashe iphepha, kodwa ingxelo sotyikityo evakalisa iinkxalabo ezisesikweni (Burnett and Feamster 2015) . Loo ngxelo sotyikityo azizange isetyenziswa ngaphambili SIGCOMM, kwaye kule meko kukhokelele ingxoxo ezongezelelweyo izazinzulu computer malunga nohlobo yokuziphatha kuphando lwabo (Narayanan and Zevenbergen 2015) .